It is me. Ko Niknayman.: အာဏာရှင်အားဆန့် ကျင်ဆဲ၊ ပြည်သူလူထုအား မြတ်နိုးဆဲဖြစ်သော အမေ လူထုဒေါ်အမာ။
အမေပြောတဲ့ “ကျန်းမာအောင်နေရတယ် သားရေ၊ ပြည်သူလူထုကြီး အောင်ပွဲခံတာကို အမေတို့မြင်တွေ့ ချင်သေးလို့ ” စကားအတိုင်း (၉၂) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ မှာ အထူးဆုတောင်းပေးချင်တာကတော့ အမေမြင်ချင်တဲ့ လွတ်လပ်ရေး မြင်ရပါစေလို့ ပါ။
Posted by Ko Niknayman at 4:55 PM